जब तपाइँ कसैलाई इन्स्टाग्राममा रोक्नुहुन्छ तब के हुन्छ? 🥇 अनुयायीहरू
जब तपाइँ कसैलाई इन्स्टाग्राममा रोक्नुहुन्छ तब के हुन्छ?
आजको पोस्टमा हामी तपाईंलाई भन्छौं जब तपाइँ कसैलाई इन्स्टाग्राममा रोक्नुहुन्छ तब के हुन्छ। हालसालैका वर्षहरूमा, इन्स्टाग्राम उर्फ ​​ईन्स्टाले विश्वलाई आँधीबेहरीले घेरेको छ, र अब प्राय जसो व्यक्तिहरूले यसलाई प्रेम गर्दछन्। तपाईंको टाइमलाइनमा स्प्याम पठाएर कसैलाई सहिष्णु गर्न पुरानो मित्रतालाई पुनर्जीवित गर्न, सबै चीज दैनिक हुन्छन्। तर जब तपाईं अधिक गर्नुहुन्छ, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई कडा कदमहरू चाल्न अनुमति दिनेछ।
ठीक छ, तपाईं लक विकल्प को मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। एक केको बारेमा उत्सुक हुन सक्छ के हुन्छ जब तपाईं कसैलाई इन्स्टाग्राममा ब्लक गर्नुहुन्छ। सरल शब्दहरूमा, लक गरिएको प्रोफाइलले तपाईंको पोष्ट र कथाहरू हेर्न सक्षम हुँदैन। तर के यो हो? अरू के हुन्छ, टिप्पणीहरू, मनपर्ने, सन्देशहरू, जीवनी र अन्य चीजहरू जस्तै?
चिन्ता नलिनुहोस् हामी यस प्रकारका सबै प्रश्नहरूको जवाफ यस पोष्टमा दिनेछौं, जहाँ हामी तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा कसैलाई रोक्दा के हुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछौं।
के तपाइँ प्रोफाइल मार्फत खोजको माध्यमबाट पहुँचयोग्य हुनुहुन्छ?
वास्तवमा होइन। केश समस्याको कारण केहि बिन्दुमा, अवरुद्ध व्यक्ति वा तपाईंले खोजी मार्फत एक अर्काको प्रोफाइल देख्न सक्नुहुनेछ, तर त्यो केही दिन पछि रोकिनेछ।
अवरुद्ध व्यक्ति तपाईंको ईस्टग्राम प्रोफाइल र यसको अनुसरणकर्ताहरू हेर्न सक्छन्
हो, अवरुद्ध व्यक्तिले तपाइँको प्रोफाइल देख्न सक्दछ, तर तपाइँको कुनै पोष्टहरू, कथाहरू वा तपाईँको प्रोफाइलमा हाइलाइटहरू छैनन्। तपाईं कसरी सोचिरहनुहुनेछ। ठीक छ, कहिलेकाँही खोज परिणामहरू मार्फत र मुख्य रूपमा टिप्पणीहरू, ट्यागहरू वा अघिल्लो समूह सन्देशहरूबाट।
इन्स्टाग्रामले अघिल्लो टिप्पणीहरू मेटाउँदैन, तिनीहरूलाई छोएर अवरुद्ध व्यक्तिलाई तपाईंको प्रोफाइलमा लैजान्छ। तिनीहरू तपाईंको प्रोफाइल तस्वीर, जीवनी, फोटो गणना र संख्या हेर्न सक्षम हुनेछन् अनुयायीहरू / अनुयायीहरू। दोहोर्याउनको लागि, तिनीहरूले तपाईंको पोष्ट वा कथाहरू देख्दैनन्। तल देखाइएको अनुसार क्षेत्र खाली देखा पर्नेछ।
तपाईंको पक्षमा पनि यही लागू हुन्छ। तपाईं अवरुद्ध व्यक्तिको प्रोफाइल पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं कुनै चाखलाग्दा जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुन्न, जस्तै प्रकाशन वा कथाहरू।
ब्लक गरिएको व्यक्तिले प्रोफाइल फोटो र जीवनीमा परिवर्तनहरू देख्न सक्छ?
हो, यदि तपाईं आफ्नो प्रोफाइल अघिल्लो टिप्पणी वा सन्देशबाट वा एक प्रयोगकर्तानाम मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं सार्वजनिक वा निजी प्रोफाइल छ कि छैन। यो किनभने दुबै प्रोफाइल तस्वीर र जीवनी सबैको लागि दृश्यात्मक छ, तपाईको निजी प्रोफाइल छ भने पनि। जैवको बारेमा कुरा गर्दै, केहि राम्रा चाल र युक्तिहरू जाँच गर्नुहोस्।
के हुन्छ जब तपाईं ईन्स्टग्राममा कसैलाई रुचि र टिप्पणिहरूमा ब्लक गर्नुहुन्छ?
ब्लकले पुराना टिप्पणीहरू वा "मनपर्दो" हटाउँदैन। अर्को प्रोफाइलको, इन्स्टाग्रामले पनि उल्लेख गरे जस्तै। त्यो हो, अवरुद्ध व्यक्ति तिनीहरूको प्रोफाईलमा उनीहरूको अघिल्लो टिप्पणीहरू हेर्न सक्षम हुनेछ, यस्तै प्रकारले उनीहरूको प्रोफाईलमा उनीहरूका टिप्पणीहरू हेर्न सक्षम हुनेछ। जे होस्, "मनपर्दो" एक अर्काको दृश्यबाट हराउनेछ जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई अनलक नगर्नुहोस्।
तपाईं एक अर्काको प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्न, तपाईं टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्न / पुरानो वा नयाँ छविहरूमा ब्लक अवधिको अवधिमा।
जब यो अन्य प्रोफाइलहरूमा गरिएको स्वाद र टिप्पणीहरूको कुरा आउँदछ, म तिनीहरूलाई या त मेरो अवरुद्ध गर्ने व्यक्ति वा जसलाई मैले ब्लक गरेको थिएँ देख्न सकिनँ। तर इन्स्टाग्रामले विपरित भन्छ र म भन्छु: "तपाईले अवरुद्ध गर्नु भएका मानिसहरूले तपाईका मनपर्ने र टिप्पणीहरू पोष्ट गर्न सक्दछन् जुन सार्वजनिक खाताहरू साझेदारी गर्दछ वा अनुसरण गर्ने पोस्टहरूमा।
व्यक्ति ब्लाक गरिएको मेन्टन्सन वा लेबल गर्न सक्दछ
आश्चर्यको कुरा, अवरुद्ध व्यक्तिले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा कतै पनि तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम प्रयोग गरेर उल्लेख गर्न वा ट्याग गर्न सक्दछन्। यद्यपि इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई सूचित गर्दैन। तर यदि तपाइँ तपाइँको प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्न, तपाइँ यो उल्लेख गर्न सक्नुहुन्न किनकि तपाइँसँग तपाइँको नयाँ प्रयोगकर्ता नाम छैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईले अवरुद्ध व्यक्तिको ट्याग गर्न सक्नुहुनेछ (कुनै कारणले), तर उल्लेख तपाईको गतिविधिमा देखा पर्दैन।
के हुन्छ जब इन्स्टग्राम सन्देशहरू (डीएम) मा कसैले ब्लक गर्दछ
तपाईंले याद गर्नु भएको छ कि ब्लकि option विकल्प डायरेक्ट सन्देशहरूमा पनि उपलब्ध छ। जहाँसम्म, फेसबुकको विपरीत, जहाँ मेसेन्जरमा ब्लकि Facebook गर्ने काम फेसबुक भन्दा फरक छ, यहाँ उही ब्लकि function फंक्शन हो जसले सम्पूर्ण प्रोफाइल ब्लक गर्दछ र सन्देश मात्र होइन।
तपाईं पुरानो सन्देशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ
होईन। लुकेका व्यक्तिलाई उनीहरूको व्यक्तिगत कुराकानी क्रमबाट DMs मा रोक्नुहोस्। त्यो हो, थ्रेड हराउनेछ र तपाईं सन्देशहरू देख्न सक्नुहुन्न (तपाईंले तिनीहरूलाई अनलक नगरे सम्म)।
के तपाईं ब्लक गरिएको व्यक्तिबाट सन्देश प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
हो र होईन। अघिल्लो कुराकानी थ्रेड अन्यको प्रोफाइलबाट गायब हुन्छ, माथि उल्लेख गरिए अनुसार, तपाईं प्रोफाइल सन्देशमा पठाउन सन्देश पठाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ विगतका सन्देशहरू हेर्न र नयाँ सन्देशहरू पठाउन।
त्यसो गर्न, पहिलेको ट्याग वा टिप्पणीहरू प्रयोग गरेर यसलाई रोक्ने व्यक्तिको प्रोफाइल खोल्नुहोस्, र शीर्षमा तीन थोप्लो आइकन ट्याप गर्नुहोस्। मेनूमा, सन्देश पठाउनुहोस् चयन गर्नुहोस्।
नोट: विधि पनि व्यक्ति द्वारा प्रयोग गर्न सक्दछ जसले अघिल्लो सन्देशहरू हेर्नको लागि कसैलाई रोकेको छ।
यद्यपि यो गर्न बेकार छ। त्यो किनभने इन्स्टाग्रामले अन्य व्यक्तिलाई आगमन सन्देशहरूको बारेमा सूचीत गर्दैन। तर जब तपाईले व्यक्तिलाई अनलक गर्नुहुन्छ, सन्देशहरू च्याट थ्रेडमा देखा पर्नेछ।
अवरुद्ध व्यक्ति स्टेट अनलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ
पछिल्लो वर्ष, इन्स्टाग्रामले डायरेक्ट सन्देशहरूमा नवीनतम एक्टोमोर्टल स्थिति सुविधा सुरू गर्‍यो। जब तपाईं कसैलाई रोक्नुहुन्छ, तिनीहरू यसलाई बाट वञ्चित हुनेछन् र यदि तपाईं सक्षम हुनुभयो भने तपाईं पनि हुनुहुनेछ।
ग्रुप सन्देशहरूसँग के हुन्छ?
यदि अवरुद्ध व्यक्ति र तपाईं समान चैट समूहको सदस्य हुनुहुन्छ भने, ब्लकले यसलाई समूहबाट हटाउने वा हटाउने छैन। तपाईं अझै सन्देशहरू पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
जहाँसम्म तपाई समूहमा एक अर्काको नयाँ सन्देशहरू देख्नुहुने छैन, व्हाट्सएपमा ब्लक जस्तो छैन जहाँ समूह सन्देशहरू प्रभावित हुँदैनन्। तपाईं अझै पनी तिनीहरूको बीचमा पहिलेका सन्देशहरू देख्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंलाई प्रोफाइल पहुँच गर्न अर्को तरीका प्रदान गर्दछ। लुकेका सन्देशहरू देखा पर्नेछन् जब तपाई व्यक्तिलाई अनलक गर्नुहुन्छ।
के यो इन्स्टग्राम बिभिन्नताको इतिहासमा अवरूद्ध छ?
ठिक छ, तपाइँ कसैलाई इन्स्टाग्राम कहानीमा रोक्न सक्नुहुन्न। तपाईं केवल मौन वा कथा लुकाउन सक्नुहुन्छ। कथा म्यूट गर्नाले तपाईंको प्रोफाइलमा रहेको अर्को व्यक्तिको कथा लुकाउनेछ र लुकाउने विकल्पको साथ तपाईं आफ्नो कथालाई तपाईंको दृश्यबाट प्रतिबन्धित गर्न सक्नुहुनेछ।
ब्लक ईन्स्टग्राम पनि ब्लक फेसबुकमा व्यक्ति?
होइन। यदि तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता फेसबुक (FB) मा लिंक गरिएको छ, एक व्यक्तिलाई इंस्टाग्राममा ब्लक गर्दै फेसबुकमा उनीहरूसँगको तपाईंको सम्बन्धमा कुनै असर पार्ने छैन .
जब तपाईले टिप्पणी नदिने कसैलाई ब्लक गर्नुहुन्छ, के तपाई तिनीहरूको प्रकाशनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ?
हो, कसैलाई तपाइँको पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्न रोक्नाले तपाइँलाई तपाइँको नयाँ वा पुरानो पोष्टहरू, कथाहरू र सन्देशहरू पहुँच गर्नबाट रोक्दैन। तपाईंको पुरानो टिप्पणी पनि रहनेछ।
यदि तपाइँलाई कसैले तपाइँको पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्नबाट रोक्न थाहा छैन भने, Instagram सेटि Instagramहरू> गोपनीयता र सुरक्षा> टिप्पणी नियन्त्रणहरूमा जानुहोस्। बाट टिप्पणीहरू रोक्नुहोस्, मानिसहरूलाई जोड्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्न।
के तपाईंले ब्लकहरूलाई जब मानिसहरूलाई सूचित गर्नुहुन्छ?
कुनै पनि इन्स्टाग्रामले ब्लक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सूचना पठाउँदैन।
यदि तपाईं स्थापनाको केहि ब्लक गर्नुहुन्छ के तपाईं व्यक्ति अनुसरण गर्नुहुन्छ?
हो, एक व्यक्ति स्वचालित रूपमा रोक्नाले तपाईंलाई निम्नबाट रोक्दछ। यो तपाइँको अनुयायीहरु बाट उनीहरुलाई हटाउनेछ । यदि तपाईं तिनीहरूलाई पछि अनलक गर्नुहुन्छ भने, दुबै पछ्याउनुपर्नेछ।
के तपाईं आफ्नो फ्लावरहरू चिन्नुहुन्छ तपाईंले कुनै ब्लक गर्नुभएको छ?
केवल तपाईं र अवरुद्ध व्यक्तिले मात्र यो गोप्य गहिरो र अँध्यारोमा राख्नेछ जब सम्म उनीहरूले कसैलाई बताउँदैनन्।
हाम्रो GTEXPLAINS ITEMS पृष्ठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंको ईन्स्टग्राम प्रोफाइल सार्वजनिक भएको बेला के हुन्छ
माथिका सबै कुरा सत्य रहन्छन्। फरक मात्र यो हो कि अवरुद्ध व्यक्तिले नयाँ इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्न सक्दछ वा अर्को व्यक्तिको प्रोफाइल प्रयोग गर्न सक्दछ तपाईंको पोष्टहरू र कथाहरू सार्वजनिक हुनका लागि।
यदि तपाइँ स्थापना गर्नुहुन्छ कसैलाई ब्लक गरियो भने तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ?
यो पहिचान गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। पहिले, ट्याग वा टिप्पणीहरू मार्फत तपाईंको प्रोफाइल खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि प्रोफाईलले पोष्टहरू बिना पोष्टहरूको संख्या देखाउँदछ। दोस्रो, यदि तपाईंको अघिल्लो सन्देशहरू तपाईंको इनबक्सबाट हराउँदछन्, तर तपाईंको प्रोफाइल अझै सामूहिक सन्देशहरूमा देखा पर्दछ, यसले संकेत पनि गर्न सक्दछ कि यो रोकिएको छ। अन्तमा, जान्नको लागि सब भन्दा सजिलो तरीका बिभिन्न प्रोफाइलबाट प्रमाणित गर्नु हो (या त तपाइँ वा तपाइँका साथीहरू)।
के हुन्छ के हुन्छ जब तपाईले कसैलाई अनस्टल गर्नुहोस् स्थापना गर्नुहोस्
माथि उल्लेख गरिएझैं कसैलाई अवरूद्ध गर्दा ती दुबैलाई अनुयायीहरूको सूचीबाट एक अर्कालाई हटाउँदछ। त्यसोभए जब तपाईं तिनीहरूलाई अनलक गर्नुहुन्छ, तपाईंले तिनीहरूलाई फेरी पछ्याउनु पर्छ। अब, यदि यो एक सार्वजनिक प्रोफाइल हो, तपाईं यसको प्रकाशन र कथाहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। निजी प्रोफाइल को लागी, तिनीहरूले पहिले तपाइँको अनुरोध स्वीकार्नु पर्छ। तपाईं त्यसपछि एक अर्काको प्रोफाइलमा मनपराउन र टिप्पणी गर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
सन्देशहरूको मामलामा, त्यो व्यक्तिको साथ सन्देश धागो फेरि देखा पर्नेछ र तपाईं तिनीहरूलाई फेरि पठाउन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। विगत र नयाँ सन्देशहरू अवरुद्ध समयमा प्राप्त भयो (यदि उनीहरूले एक पठाएको छ) पनि देखा पर्नेछ।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, ती दुई प्रोफाइलहरूले दुई सामान्य प्रोफाइलहरूको रूपमा काम गर्दछन् जसले एक अर्कालाई पछ्याउँदैन।
कसरी ब्लक गर्ने वा कसैलाई अनलक गर्ने
प्रोफाइल ब्लक गर्न, यी चरणहरूको पालना गर्नुहोस्:
1 चरण: तपाईंले ब्लक गर्न चाहानु भएको प्रोफाइल खोल्नुहोस्।
2 चरण: शीर्षमा तीन थोप्लो आइकन थिच्नुहोस्। पप-अप मेनूमा, ब्लक चयन गर्नुहोस्।
एक व्यक्ति अनलक गर्न, माथि उल्लेखित चरणहरू दोहोर्याउनुहोस् र अनलक विकल्प थिच्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईं आफ्नो प्रोफाइल पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने, Instagram सेटि Instagramहरूमा जानुहोस्> गोपनीयता र सुरक्षा> लक गरिएका खाताहरू। तपाईंले अनलक गर्न चाहानु भएको प्रोफाइल ट्याप गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको प्रोफाइल मा लगिनेछ। अनलक थिच्नुहोस्।
Jumping भन्दा पहिले सोच्नुहोस्
अब तिमीलाई थाहा छ के हुन्छ जब तपाईं कसैलाई इन्स्टाग्राममा ब्लक गर्नुहुन्छ। त्यसोभए त्यो महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। तपाईंले उनीहरूसँग सम्पर्कबाट बच्न अन्य विधिहरू प्रयास गर्नुपर्दछ, जस्तै उनीहरूको पोष्ट वा सन्देशहरू मौन बनाउने, उनीहरूको कथाहरू लुकाउने, कथाहरू नजिकका साथीहरूमा सीमित राख्ने, वा तिनीहरूलाई उनीहरूको अनुयायीहरूबाट हटाउने जस्ता।
कारखाना आईफोन पुनर्स्थापना
इन्स्टाग्राम गोपनीयता सेट गर्नुहोस्